Daniely 14 - Ny Baiboly
Daniely toko 14
Bela sy ilay Dragona.
1Ary Daniely nihinana teo amin'ny latabatry ny mpanjaka, ka nahazo haja mihoatra ny sakaizany rehetra.
2Tamin'ny Babiloniana, dia nisy sampy anankiray atao hoe Bela, izay nandaniana lafarina roa ambin'ny folo artaba, ondry efapolo, ary divay enina metreta isan'andro. 3Ny mpanjaka koa nanaja an'io sy nandeha nivavaka taminy isan'andro; fa Daniely kosa nivavaka tamin'Andriamanitra. Ka hoy ny mpanjaka taminy: Nahoana hianao no tsy mba mivavaka amin'i Bela? 4Dia hoy ny navaliny azy: Satria tsy mba izay sampy nataon-tanan'olombelona, fa ilay Andriamanitra velona, izay nahary ny lanitra sy ny tany sady manan-pahefana amin'ny nofo rehetra ihany no ankalazaiko. 5Ary hoy ny mpanjaka taminy: Ataonao fa tsy zavatra velona va Bela? Tsy hitanao va ity zavatra rehetra haniny sy sotroiny isan'andro? 6Sady nitsiky Daniely no namaly hoe: Aoka tsy ho diso hevitra amin'izany hianao, ry mpanjaka; fa fotaka ny ao anatin'izy io, ary varahana ny ivelany, ka tsy mbola nihinana na inona na inona, izy. 7Tezitra ny mpanjaka ka niantso ireo mpisoron'i Bela sy nanao taminy hoe: Raha tsy lazainareo amiko izay mihinana ireny fanatitra ireny dia maty hianareo; 8fa raha voasehonareo amiko kosa fa Bela no mihinana ireny dia Daniely no maty, satria niteny ratsy an'i Bela izy.
9Ary nisy fitopolo lahy ny mpisoron'i Bela hafa-tsy ny vady aman-janany. Dia nankany amin'ny tempolin'i Bela ny mpanjaka sy Daniely. 10Ka hoy ireto mpisoron'i Bela: Izahay handeha hivoaka; fa hianao kosa, ry mpanjaka, asaovy apetraka ny hanina, ary asaovy haroso ny divay rahefa voaharoharo, dia hidio ny varavarana, sady asio tombokase amin'ny fanombohan-kasenao. 11Ary rahampitso maraina, rahefa miditra hianao, ka hitanao fa tsy lanin'i Bela izany rehetra izany, dia ho faty izahay, na hoe Daniely no ho faty kosa, fa nandainga namely anay. 12Tsaroany tao an-tsainy fa nasiany fidirana miafina tao ambany latabatra, ka teo mandrakariva no nidirany sy nahatongavany handany ny fanatitra. 13Nony nivoaka izy ireo, ka efa nasain'ny mpanjaka napetraka teo anoloan'i Bela koa ny hanina, Daniely kosa, nandidy ireo mpanompony hitondra lavenona, ary naeliny manerana ny tempoly teo anatrehan'ny mpanjaka irery ihany izany, vao nivoaka izy ireo, dia nohidiany ny varavarana, sady nasiany tombo-kase tamin'ny fanombohan-kasen'ny mpanjaka, dia lasa nandeha izy. 14Ny mpisorona kosa nony alina, niditra araka ny fanaony, niaraka tamin'ny vadiny aman-janany, dia nihinana sy nisotro izay rehetra teo. 15Nifoha maraina koa ny mpanjaka, ary Daniely koa. 16Ary hoy ny mpanjaka: Tsy nahafahana va ny tombo-kase, ry Daniely? Hoy ny navaliny hoe: Tsy nahafahana, ry mpanjaka ô. 17Raha vao novohan'ny mpanjaka ny varavarana, ka nojereny ny latabatra, dia niantso izy tamin'ny feo manao hoe: Lehibe hianao, ry Bela ô, sady tsy misy fitaka aminao. 18Latsaky ny hehy anefa Daniely, ary notazoniny tsy handroso alohaloha kokoa ny mpanjaka, nilazany hoe: Jereo ny ngorodom-bato, diniho fa dian'iza ireo? 19Ka hoy ny mpanjaka: Dian-dehilahy sy zaza amam-behivavy no hitako, sady tezitra mafy izy. 20Ary nasainy nosamborina ireo mpisorona, mbamin'ny vady aman-janany, dia nasehon'ireo azy ny varavarana miafina nidirany sy nahatongavany hihinana izay teo ambony latabatra. 21Nasainy novonoina ho faty izy ireo, ary Bela natolony eo am-pelatanan'i Daniely, dia noravany hatramin'ny tempoliny.
22Nisy dragona lehibe koa, ary nankalazain'ny Babiloniana. 23Ka hoy ny mpanjaka tamin'i Daniely: Hataonao hoe varahana koa va io? Jereo fa velona izy, mihinana sy misotro izy. Koa amin'izao tsy ho azonao lazaina fa tsy andriamanitra velona izy io. 24Fa hoy ny navalin'i Daniely: Mivavaka amin'ny Tompo Andriamanitro aho; satria izy no Andriamanitra velona, fa ity tsy andriamanitra velona akory. 25Aoka hianao, ry mpanjaka ô, hanome làlana ahy fa hovonoiko tsy amim-tsabatra na tehina akory io dragona io. Hoy ny mpanjaka: Omeko làlana hianao. 26Dia nalain'i Daniely ny ditin-kazo sy ny sabora ary ny volo, nataony indray mahandro ireo dia novolavolainy ho boribory vao natsipiny tao am-bavan'ity dragona. Ka niatatra ny dragona. Dia hoy izy: Io ilay nankalazainareo!
27Nony nandre izany ny Babiloniana dia nirehitra mafy ny fahatezerany, ka nivory hanohitra ny mpanjaka izy, sy nanao hoe: Tonga Jody ny mpanjaka, fa Bela noravany, ny dragona nasainy novonoina; ary ny mpisorona naripany. 28Koa nankao amin'ny mpanjaka izy ireo, dia nanao taminy hoe: Atolory anay Daniely fa raha tsy izany, hianao sy ny ankohonanao no hataonay maty. 29Hitan'ny mpanjaka, fa niantoraka taminy tamin-kasahiana izy ireo, ka azon'ny hamehana dia mba nanolotra an'i Daniely tamin'izy ireo. 30Natsipiny tao an-davaky ny liona izy, dia nipetraka tao henemana. 31Liona fito no tao an-davaka; vatana roa sy ondry roa isan'andro no fanome azy ireo; nefa tsy nomena izany fihinany izany izy ireo tamin'izay, mba hihinanany an'i Daniely.
32Tany Jodea kosa, Habakoka, mpaminany, tamin'izany andro izany, nony avy nahandro koba izy, sy namotipotika mofo tao anaty vilany dia nankany an-tsaha izy, nitondra izany ho an'ny mpijinja variny. 33Fa hoy ny anjelin'ny Tompo tamin'i Habakoka hoe: Ento mankany Babilona iny sakafo entinao iny, ho an'i Daniely ao an-davaky ny liona. 34Ary hoy Habakoka: Tsy mbola nahita an'i Babilona akory aho, tompoko, ary tsy fantatro akory izany lavaka izany. 35Dia noraisin'ny anjely avy eo an-tampon-dohany tamim-pahafainganana indrindra, araka ny fomban'izy fanahy, ary napetrany tao Babilona, teo ambonin'ilay lavaky ny liona. 36Ary Habakoka niantso hoe: Ry Daniely mpanompon'Andriamanitra ô, raiso ny sakafo alefan'Andriamanitra ho anao. 37Ka hoy ny navalin'i Daniely: Andriamanitra ô, tsarovanao tokoa aho, fa tsy mandao an'izay tia anao hianao. 38Dia nitsangana hihinana Daniely. Ary nataon'ny anjely tao amin'ny fitoerany indray, niaraka tamin'izay, Habakoka.
39Nony tamin'ny andro fahafito, tonga ny mpanjaka hitomany an'i Daniely; nanatona ny lavaka izy, dia nijery ary indro Daniely nipetraka teo afovoan'ny liona. 40Niantso izy tamim-peo avo hoe: Lehibe hianao, ry Tompo, Andriamanitr'i Daniely, ary tsy misy hafa, hafa-tsy hianao ihany! 41Dia nesoriny avy tao an-davaky ny liona izy. Ary ireo nitady hahafaty azy kosa no nasainy natsipy tao, ka voarapaka vetivety foana, teo imasony. 42Tamin'izay ny mpanjaka nanao hoe: Aoka ny mponina rehetra eran'ny tany rehetra hatahotra ny Andriamanitr'i Daniely; fa izy no Mpamonjy, izy no manao famantarana amam-pahagagana eto ambonin'ny tany; izy no nanafaka an'i Daniely tao an-davaky ny liona. >